Craven, Patrick Translation ka-Manzi, Faith (2008) UKUSHIKASHIKEKA KWABASEBENZI. CCS IOLS Labour Day Festival : -.
Kubalulekile kakhulu; njengoba kwasho uSophocles ngelinye ilanga wathi, “Ngaphandle kokushikashikeka ayikho into engaphumelela”. Angazi ukuthi uSophocles wayecabangani ngenkathi esho lokhu kodwa kuchaza kahle kakhulu umbono kaMarx othi umnotho odalwa ngamandla abasebenzi ngezimpahla eziluhlaza kanye nemishini ukudala osekwakhiwe kube nesisindo semali. Yonke into esiyidlayo nesoyigqokayo, yonke imishini esiyisebenzisayo ekhaya, ezokuthutha, amandla kagesi, amanzi kanye nezangaphandle ngabe akukho ukuba akukhona ukusebenza kanzima kwezigidi zabasebebzi abashikashikekayo bekhiqiza.
Kwabaningi benu lokhu kungabonakala kulula. Kodwa baningi abangakunaki lokho. Iziphathimandla zezinkampani ezinkulu ngisho noEskom, bahlale bezama ukuchaza ukubaluleka abakuletha ezinkampanini ukuze bahole imali enkulu futhi bathole nemiklomelo. Isikahthi esiningi lezizimali azihlangani nokwenza kahle kwezinkampani; kodwa noma inkampani iyandisile inzuzo abasebenzi hayi iziphathimandla, abadala umcebo onenzuzo ethe thuthu.
Imali eholwa ngabasebenzi ayikhombisi ukubaluleka kweqhaza abalibambayo lapho kukhiqizwa. Imiholo yabo ayenyuki ngesivinini ngenkathi inzuzo eyengezekile ingenela abaqashi babo. Abanikwa “imiklomelo yokwenza kahle” ngenkathi inzuzo yenkampani yenyuka.
Abaqashi bangathanda ukungayinyusi nhlobo imiholo futhi ukube bayakwazi ukwenza ngabe bayayehlisa. Kuze kube ngenxa yezinhlangano zabasebenzi ezinamanlda nokusabisa noma ukusebenzisa, isiteleka okwenza izinga lempilo yabasebenzi ithuthuke.
Akukho okukhombisa lokho kangcono njengehlandla lokudla, okuchaza kangcono kunezinye izinkinga zesimo sabadla izambane likapondo. Lemali engeziwe ekhokhwa ngabathengi ezitolo eyingeni emaphaketheni abalimi abampofu, ikakhulukazi abasebenzi emapulazini, ezitolo zokudla okubhakiwe, lapho kwenziwa khona ubisi kanye nezindawo ezikhiqiza ukudla.
Empeleni ibona abaxhashazwa kakhulu ngamaholo ngaphandle-nje kokubiza kwezidlo abazikhiqizayo. Abaningi bazabalezela lemithelela yesimo sezambane likapondo – ukuthi abasebenzi ngeke bakwazi ukuthenga lezizidlo abazikhiqizayo. Ngakho-ke sinabahluphekayo, ngisho nabantu abalambayo, abasebenzi kanye neningi labathengi – kodwa maphakathi sibe sine Nestle, Kelloggs no Walmarts, lapha eNingizimu Afrika iTiger Brands, Woolworthss kanye no Pick ‘n Pay benza inzuzo eningi ngamazinga aphezulu amanani.
Lokhu kuyaqhubeka kuba kubi kakhulu njengoba kusanda kwenyuka amanani. Lokhu abezindaba bakukhombisa “njengenkinga” yomhlaba – futhi ingingi labantu bamakhulu ezigidi abahluphekayo kakhulu emhlabeni wonke kuyinkinga ngempela; osekudale izibhelu emazweni ambalwa.
Kodwa omunye umngani wami wabeka umbuzo ohuhayo ngesimo “salenkinga”. Kuchaza ukuthi ngaphambi kokushesha kokwenyuka kwamanani akukho obekungalungile ngokuqavile ngendlela ukudla komhlaba obekukhiqizwa futhi kusabalaliswa ngayo futhi kuthengiswa. Bekuhlale kuzuza izicebi nabanamandla kuhwebo lamapulazi kuhlangene nokusetshenziswa kanzima kwabasebenzi kanye nabathengi abampofu futhi lokunyuka kwamananai sekwenze kwanzima kakhulu.
Abakhulumela abahwebi bayathanda ukuthi balandela imigomo yokuncintiselana ngokukhululekile, kodwa iqiniso, lamanani ileli, bahlale bekhohlisela ukwenyusa inzuzo. Ukuqhubekiswa kokuswela ikona okubalulekile kulokhu. Iphupho elibi kakhulu labadla izambane likapondo yileli – ukuba khona kakhulu kokudla ukuze kube kuningi okuzozungeza ngamanani aphansi kakhulu.
Ezimweni ezimbi kakhulu njengendaba yaseTiger Brand yokwenza inani elilodwa ikona okwenza bazuze kakhulu futhiiCompetition Commission iyaphenya ukuthi abukho yini ubufakazi obungase buphathelane nalobugebengu. Ngeke kumangaze ukuthola ukuhti namanye amazwe ayakwenza lokhu.
Emazweni aseNyakatho, eJaphani kanye naseMelika anbahwebi bokudla sebethole izindlela ezithule ezingcono zomthetho zokwenyusa inzuzo yabo. Abagcini-nje ngokwenza inzuzo enkulu kodwa futhi babuye baxhaswe ngohulumeni babo ngezimali ezinkulu. Ezweni lase Frace – nje kup[hela ukuxhasa kufika kuR310 wamabhiliyono ngonyaka. Pho ubani ongavikela lokhu “ngengohwebo olukhululekile”? Ukuzuza okungenanembeza ngegazi labasebenzi nabahluphekayo.
Ngapheezu kwalokho manje sekunokuthuthukiswa kukawoyela osuqaliwe owenziwa ngokudla. Emelika-nje kuphela ingxenye enkulu ekhiqiziwe yommbila kulonyaka kusolakala sengathi izokwenziwa uwoyela i-ethanol. Lokhu kunyusa kakhulu amanani okudla futhi bese kunika abahwebi bamapulazi inzuzo enkulu kakhulu bevele bexhaswe uhulumeni ngezimali.
Konke kubonisa ukuthi amanani okudla awancikile kubudlelwano namaholo abantu abakhiqiza ukudla – abasebenzi. Okwenzekayo kwenzeka nakweminye imikhiqizo, inni elibizwa bathengi alihlangene nokukhiqiza kodwa ngamanani abekwe izimakethe zomhlaba. Usasol udayisa upetrol ngenani eliphoqwe iOpec, kodwa bebe bekhiqiza uwoyela emalahleni futhi ngamanani aphansi.
Ngakho-ke singafika kanjani emnothweni, lapha eNingizimu Afrika kanye nomhlaba, lapho abasebenzi abadala ingcebo bengadla izithelo zezikhwepha zabo?
Akukho mpendulo, elula, ngoba lenkinga eyomhlaba jikelele. Kodwa lokho akusho ukuthi kufanele sihlale phansi singenzi lutho. Umyalezo owumlando wosuku lukaMeyi ukuthi abasebenzi uma behlangene bangawuguqula umhlaba. Ukuhlangana kwabasebenzi bakaSatawu bokunqaba ukuthulula izikhali ezaziya eZimbabwe kuyisibonela esihle salomkhuba.
ICosatu kade yaqala ikhankasa, kanye nohulumeni baseNingizimu Afrika kanye namanye amazwe asathuthuka, kudala ngaphambi kwalokunyuka ngomfutho kwamanani okudla; ukuthi umhlaba uguquke indlela ohweba ngayo.
Amazwe aseNyakatho agqilikile, vele-nje abasemathubeni amahle, ngokuxhaswa kakhulu futhi bavikelwe ukuthi kube yibo abalawulayo, bacindezela amazwe ampofu aseNingizimu ukuvula izimakethe zabo ngamanani aphansi ukuze bona bavikele izimboni zabo.
Ngokwehluleka ukufika esivumelwaneni neNhlangano Yezizwe Yokuhweba (World Trade Organization), iEuropean Union izama ukuvumelana “nesivumelwano somnotho sobungano’ namazwe ngamanye aseAfrika, eAsia kanye neLatin America, lesisivumelwano iNingizimu Afrika enqabile ukusisayina. Kusenomzabalazo omkhulu ngaphambili kodwa yimpi ekungafanele isahlule.
Ngaphakathi eNingizimu Afrika kunezinyathelo esingathathwa ngokushesha ukwehlisa ukuzwela kokunyuka kwamanani kubathengi abaswele kakhulu. Ukuxhaswa ngabezenhlalahle kanye namaholo amancane kakhulu abasebenzi okwenziwa imikhakha ehlukahlukene kufanele enyuswe ngokushesha ukubhekana nokwehla kwezinga lempilo yabo. Izinyunyana kulonyaka kumele ziqinisekise ukuhti ukunyuka kwamaholo alonyaka kungaphezulu kokubiza kwempilo. Lokho ngikukholelwa kakhulu ngoba ukunyuka kwezinga lokuphila akwenzi lutho ukubhekana nokuthula kakhulu kwamazinga okungalingani emphakathini.
Enye ingxenye ebalulekile yokusombulula inkinga yamanani okudla ukusheshisa izinhlelo zokubuyisela umhlaba ukuze kube nomhlaba ongasetshenziselwa ukutshala ukudla. Abanikazi bomhlaba bacebile baguqula kakhulu umhlaba ongasebnzi bawenza izindawo zokungcebeleka kanye nokudlala igalofu. Into engsiza kulokukunyuka kwamanani ukuthi abalimi abancane abasha bangaziphilisa uma bangaqale bathole umhlaba kuqala.
Kodwa lokho futhi kuyaqhubeka nokuthi izimboni zokudla zengamele izinkampani ezinkulu ezizimele ezenza inzuzo enkulu. Ukubhekana nalokhu ingxenye yeCosatu kuSection 77 Submission ngamani okudla ifuna ngesankahlu lokhu:
Ukuphela kwenzuzo enkulu kanye namaholo aphezulu kubaphathi.
Ukwehliswa ngokushesha inani lokudla okudingeka kakhulu kanye nokumiswa kwamanani okudla;
Ukuxoshwa kwezikhulu ezimbonini zokukhiqiza ukutshala kanye nokudayisa ezitholakala zinecala lamanani ashayisanayo, kanye nezinye izindlela ezicindezela ukuqhudelana;
Imboni eyodwa noma ezimbalwa eziphethwe nguhulumeni ezingadayisa ukudla okubalulekile njengempuphu, isinkwa, ubisi, ezinye izithelo, kanye nokunye kube sekwenzeka eminyakeni emibili ezayo;
Inational Food Price Regulator ezonquma amananai futhi iwanyuse kulokudla okuyizidingo;
Ukwenza isizwe sinque amanani okubiza kwempuphu, isinkwa kanye nobisi.
Lesisidingo sokugcina isona esidonse kakhulu amehlo nokuphikisana kodwa ngokubona kwami isona sixazululo esihamba phambili “imakethe yezomnotho” eNingizimu Afrika nomhlaba wonke bahlulekile ukunikeza ukudla ngenani elikahle kwizigidi zabathengi abahlupheka kakhulu. “Ukukhululeka kokudayisa” sekuyinganwekwane-nje futhi kuzozonke izimboni. Uhlelo lwabadla izambane likapondo olwenza ukuthi babe namandla okudala ukusweleka kokudla (kube kukhona) ukuze banyuse amanani bese bayazuza futhi.
Ukugxambukela kukahulumeni kubalulekile
Indlela yokuthi kwenziwe kanjani ukubuyisela ukudayisa kuhulumeni akukhulunywa ngakho. Ngeke ngikhethe ukopolotsheni wokudla kazwelonke ongalawulwa njengendlela ekuhluleke ngayo uEskom. Kufanele kube khona inhlangano ekhululekile yabasebenzi engalawulwa yizigungu, kodwa futhi ibe ihambisa phambili umgomo wokwandisa ukukhiqiza, futhi kunikwe abasebenzi amaholo amahle kanye nemibhanselo.
Ngaphandle kokuguquka kwendlela yokudayisa yonhlaba, uhlelo olunjalo lungaba nzima. Yingakho isu elihleliwe lomhlaba wonke lubalulekile.
Ngibhekane nokudla ngoba indaba esematheni futhi isibonelo esihle esikhombisayo ukuthi yini engalungile ngesimo sabadla izambane likapondo kodwa lomgomo ungena kuzo zonke izimboni. Kuzozonke izimboni sibona inkinga eyodwa – abasebenzi badala umcebo bazabalezela ukuphila ngenkathi abaqashi babo bezicebisa ngegazi labasebenzi nabathengi. Indlela yentando yeningi yabantu bonke kuphela engaqeda ubuphofu nedlala ehlale ikhona ngaphansi kwesimo sombuso wezambane likapondo futhi lesisimo esiya siba sibi kakhulu sehlisa kakhulu iznga lesimo sempilo.